Abezithuthuthu banikele ngomfaniswano esikoleni – Sivubela intuthuko Newspaper
By admin	 Last updated May 20, 2021 215
LABA ngabanye babafundi baseChibelihle abahlomule ngomfaniswano benethimba laBangabani Bikers Association
KUTUSWE iqhaza laBangani Bikers Association in KwaZulu-Natal ngokuthi bethi bedlala ngezithuthuthu kodwa babuye babheke emphakathini belule isandla lapho benamandla khona.
Abangani bahambele eChibelihle Combined School eMpendle beyonikela ngomfaniswano ezinganeni ezingu-80 ezihlonzwe njengeziphuma emakhaya ahlwempu. Lapha bekunikelelwa izingane kusukela kwa-Grade R kuze kufike ku-Grade 12 ebezithola imfaniswano uphelele kusukela onyaweni kuya phezulu.
Ekhuluma egameni laBangani Bikers Association in KwaZulu-Natal uMnu Nhlanhla “Maphepha” Zuma uthi ukuqhwizisa kwabo izithuthuthu kakusiwona umdlalo ngoba zonke izinkinga ezibhekene nomphakathi bayazazi futhi nabo ziyabathinta njengoba beyingxenye yawo. Uthe lesi sikole ebebesihambele naye ungomunye wabafundi abafunde kusona ngakho ube nesifiso sokwenza umnikelo omuhle kubafundi. “Abantu baye babone uma sigibele izithuthuthu sengathi singabantu abakhonze ukudlala. Lapha enhlanganweni sinabanumzane nomama bemizi okuthi uma sizihlalele sikhulume ngezinto ezakhayo. Ngibe sengicela kubona ukuba senze umnikelo engizowuletha esikoleni engafunda kusona nebala isicelo sami kasangabukelwa phansi njengoba sikwazile ukuhlanganisela izingane eziwu-80 esithemba ukuthi nabazali bazokujabulela okwenziwe ezinganeni zabo,” usho kanje.
UMnu Bonginkosi Dlamini onguSihlalo wesigungu esilawula eChibelihle Combined School ubonge okwenziwe ngaBangani Bikers Association nabafundi abadala balesi sikole abelule isandla ezinganeni bazinikelela ngomfaniswano. “Siyisigungu futhi simele nomphakathi wonkana sibongela abazali ngokwenziwe ezinganeni zabo. Sikholwa ukuthi lokhu okutholiwe kuwele ezandleni ebezidinga ngempela. Sikholwa ukuthi kuzoba usizo olukhulu ngokuqonda inhlalo kumbe impilo yasemakhaya lapho izingane ziphuma khona njengoba zizialwa emakhaya angalingani,” usho kanje.
Uthishanhloko wesikole uMnu Nkosinathi Gcaba uthe lokhu okwenziwe kubafundi besikole asibhekile kuzolekelela ekuphunguleni umthwalo wabazali njengoba kudingeka bahlinzeke izingane zabo ngokudla babuye bababhekele umfaniswano wesikole kanti abanye babo kabasebenzi baphila ngemali yesibonelelo sazo lezi ngane.
Ekhuluma egameni lozakwabo uZola Duma ubonge abakwenzelwe ngaBangani Bikers Association ethi isandla sidlula ikhanda bengabafundi ngoba sebezofana bonke uma bengaphakathi emagcekeni esikole.